XOG RASMI AH: DF Soomaaliya miyey ka jawaabaysaa ficilada Siyaasadda ka araddan ee Kenya qaadayso? – Puntlandtimes
May 21, 2019 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Saacadihii lasoo dhaafay Kenya ayaa qaaday talaabo kale oo muujinaysa in uu wali jiro xariir xumo baahsan oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya, ka dib markii ay dalkeeda ka celisay Wasiiro, Xildhibaano, Shaqaale dawladeed iyo Shacab oo ay u diiday in ay dal kugalkeeda siiso, si gaar ahna Baasaboorka Soomaaliga qeybta Shaqaalaha dawladda iyo kan Diblumaasiga u diiday in ay siiso dalkugalka.
Talaabadaas ayaa dad badan u arkeen mid muujinaya hab dhaqan siyaasadeed oo foolxun, waxayna Kenya qaadatay talaabo ah in ay Soomaalida ku cadaadiso in ay lasoo laabtaan dacwadda Badda ee Maxkamadda ADuunku qaadayso, taas oo ay u arkaan in looga awood badanayo.
Falanqeeyaasha Siyaasadda labada dal ayaa rumeysan in ay Kenya ku dhacday mar kale god siyaasadeed oo halis badan, oo aysan ka fiirsan maadaama ay sadexdii toodbaad ee lasoo dhaafay ku jirtay dagaal adag oo siyaasadeed kuna wajahan Soomaaliya.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in uu jiray wada hadal dhexmaray Madaxda Soomaaliya & Kenya, xalay oo looga hadlayay in loo ogolaado Wasiiradda dawladda Faderaalka, ka qeybgalka kulan ka dhacaya maanta magaalada Nairobi oo ay leeyihiin wadamada Itoobiya, Kenya & Soomaaliya, balse ay diiday Xukuumadda Kenya.
Soomaaliya, lama garanayo talaabada ay qaadi doonto, balse wararka hoose ayaa sheegaya in aysan suuragal aheyn in dhinaca dhaqaalaha ay Soomaaliya u weeciso dagaalka ee ay ku wadayso arrimaha Siyaasadda oo kaliya, aysana waxba badan oo jawaab ah siin doonin dawladda Kenya.
Kenya waxay doonaysaa in ay Soomaaliya qaado talaabo culus, oo markaas ay bilaabatay dhexdhexaadin weyn si ay ugu gorgortanto Kiiska badda oo dib loogu soo celiyo wada hadalka labada dhinac, laakiin Khubrada Siyaasadda Soomaalida ayaa fahamsan ficilada Kenya.